ကိုးကားဖျောပွခကျြမြား – Media9
ကိုးကားဖျောပွခကျြမြား နိုငျငံတကာ လူမှုဘဝ သတငျး
[Zawgyi] မေရီဂွတ်ဟဒ် ဘီဘီစီသတင်းဌာန၊ မာလာဝီ 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2019 သေဘေးကနေ ၃ ကြိမ် လွတ်ခဲ့သူ မာလာဝီနိုင်ငံမှာ သေဒဏ် ကျခံထားရတဲ့ ဘိုင်ဆန် ကော်လာ ဆိုသူဟာ ကြိုးကွင်းစွပ် ခံရလုနီးပါး ၃ ကြိမ် ကြုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးကွင်းစွပ်မယ့်သူက တခြား အကျဉ်းသားတွေကို ဒေါက်ဖြုတ် စီရင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အလှည့် ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်နားလိုက်တဲ့ အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး ၃ ကြိမ်စလုံး ကြိုးကွင်းစွပ် မခံလိုက်ရပါဘူး။ အခုအခါ မာလာဝီနိုင်ငံမှာ သေဒဏ်ပေး ကွပ်မျက် စီရင်တာကို အစိုးရက ရပ်တန့်လိုက်တဲ့အတွက် ဘိုင်ဆန် ကော်လာ တစ်ယောက် သေဘေးကနေ လွတ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသတ်မှုနဲ့ သူသေဒဏ် ကျခံခဲ့ရတာဟာ သူ့အပေါ် မနာလိုတဲ့ […]
သူ့မရဲ့ အဟှာပုံတှေ Like & Share လုပျသူတှကေို တရားစှဲမယျဆိုတဲ့ သငျးသငျး
December 14, 2018 media9Comment(0)
[Zawgyi] ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သင်းသင်းဆိုတဲ့မော်ဒယ်မလေးဟာ..ဝေဠုကျော်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြသနာတွေတက်ရင်း…သနားကြတဲ့သူတွေရှိသလို…ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရသူလေးပါ..ဝေဖန်မူတွေတစ်ဖတ်က…သူ့ဘဝလေးမှာတော့ဖြင့် မိသားစုအတွက်..ရသမျှငွေလေးကိုစုရင်းမိခင်ဖြစ်သူ့ကိုလုပ်ကျွေးနေသူလေးပါ…ခုတလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မိမိရဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့်..ဆွေမျိုးတွေခင်ဗျာ..ဖုန်တောင်မကိုင်ရဲ..မကြည့်ရဲ့ကြတော့တဲ့အထိ လောကဒဏ်ကကိုခံစားနေရသူအဖြစ်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေက စာနာပေးကြပါတယ်။ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာတော့… ကျမကို ဆူးရှထက် ခင်မာမြင့်တို့နဲ့ မနှိုင်းကြပါနဲ့ရှင် ကျမမိဘကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ မိကောင်းဖခင်သားသမီးတစ်ယောက်ပါလို့ ..ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်လဲအခုလိုပဲတင်ထားတာတွေကိုလဲတွေ့ရပါတယ် ….တစ်ချိန်ကဆိုပြီး “ယောက်ျားနဲ့ဗိုလ်တထောင်ဘုရားမှာ အမှတ်တရပုံရိပ် ” လို့ Memory တက်လာတာကိုပြန်လည်တင်ထားတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ “Interview ကို Edit ဖျက်ရင်ကိုလိုချင်တာဘဲမဖျက်ပါနဲ့ ဖျက်သင့်တဲ့နေရာမဖျက်ဘဲ မဖျက်သင့်တဲ့နေရာတွေလျှောက်မဖျက်ပါနဲ့ interview မလုပ်ပါဘူး ပြောထားတာတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလို့လည်း view ပေးရသေးတယ်။ကို့ page နာမည်ကြီးဖို့တွက်လိုတာကိုဆွဲပီးeditမဖျက်ပါနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပါ။နာမည်တော့တတ်မပြောတော့ဘူးနော်။ကို့ဘာသာဘဲသိလိုက်တော့။” လို့တစ်ချို့မီဒီယာတွေက သူမရဲ့အင်တာဗျူးဖြေဆိုမှု့တွေကို မီဒီယာဘက်ကနာမည်ကြီးချင်ယုံ လိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေပဲ ဖျက်ပြီးယူတဲ့အတွက်လဲ သူမခံစားနေရတာကိုရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ပုံတချို့ကိုလဲ ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebookပေါ်မှာပျံ့နှံနေတဲ့ အပေါ်မှာလဲ အခုလိုpost တင်ပြီးရေးသားထားပါတယ်။”ကျမပုံဖြန့်တဲ့သူ like&Shareလုပ်သူတွေကိုတရားစွဲပါမည်။” လို့ သူမဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ thin thin facebook […]
December 12, 2018 December 12, 2018 media9Comment(0)
ကိုးကားဖျောပွခကျြမြား ဆောငျးပါး ဗဟုသုတ လူမှုဘဝ
သငျ့ကလေးဟာ ပါရမီရှငျလားသိနိုငျစမေယျ့ လက်ခဏာ၁၀ခကျြ
December 6, 2018 December 7, 2018 media9Comment(0)
[Zawgyi] သင့်ရင်သွေး ဉာဏ်ကောင်းပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား? ကလေးတိုင်းဟာထူးခြားပါတယ် မိဘမှန်ရင် ကိုယ့်သားသမီးကိုယ် ထူးခြားသူများ သူများထက်သာသူများသာ ဖြစ်စေချင်ကြတာချည်းပါပဲ၊ ကလေးတိုင်းက တကယ်လည်း ထူးခြားသာလွန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကလေးတွေကတော့ နောင် တစ်ချိန်မှာ အထင်ကရ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာဖို့ ပါရမီပါလာကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရင်သွေးဟာ ဉာဏ်ကောင်းရုံတင်မကဘဲ နောင်တစ်ချိန်မှာ အိုင်းစတိုင်းလို ၊မိုးဇက်လို ၊မာရီ ကျူရီးလို ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ့်သူဆိုရင်ရော…သင်သိနိုင်ပါ့မလား?။ “ပါရမီ” ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိတို့ကလေးဟာ မွေးရာပါ အရည်အချင်းစမ်းသပ်မှု အဆင့်ဆင့်ကို အောင်မြင်ခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ (သို့)၊တစ်ခုထက်ပိုပြီး ကျကျနန လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် စွမ်းရှိခြင်းကို ‘ပါရမီ’ ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုအရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်မီပါတယ်လို့ ကောက်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရမှတ်ကိုပဲ […]